Wararka - Aqoonta guud ee dharka dharka
Aqoonta guud ee dharka dharka
1. Dhar jilicsan
Dharka jilicsan guud ahaan waa kuwo khafiif ah oo fudud, oo leh dareen wanaagsan oo jajab ah, xariiqyo siman, iyo silhouettes dabiici ah. Dhar jilicsan inta badan waxaa ka mid ah dharka jilicsan iyo dharka xarkaha oo leh qaab dhar jilicsan iyo maro jilicsan. Dharka jilicsan ee jilicsan ayaa had iyo jeer adeegsada qaabab toosan oo fudud si ay uga tarjumaan curlsyada quruxda badan ee jidhka bini’aadamka ee naqshadda dharka; xariir, hemp iyo maryo kale ayaa ka dabacsan oo jilicsan, oo muujinaya qulqulka khadadka dharka.
2. Dhar aad u fiican
Dharka cidhiidhiga ahi waxay leeyihiin khadad cad iyo dareen mugleh, oo samaysan kara silhouette go'ay. Sida caadiga ah loo isticmaalo waa maro cudbi ah, maro-polyester ah, cudduud, maro, iyo dhogor dhexdhexaad ah iyo dhar dhogorta kiimikada ah. Dharka noocan oo kale ah ayaa loo isticmaali karaa naqshadaha muujiya saxsanaanta moodelista dharka, sida ku habboonaanta iyo ku habboonaanta.
3. Dhar dhalaalaya
Dusha sare ee dharka dhalaalaya ayaa siman oo ka tarjumaysa iftiin ifaya, oo leh dareen dhalaalaya. Dharka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah dharka leh maqaarka satin. Waxaa badanaa loo isticmaalaa dharka habeenkii ama dharka waxqabadka masraxa si loo soo saaro muuqaal muuqaal qurux badan oo dhalaalaya. Dharka dhalaalaya ayaa leh noocyo badan oo xorriyadda moodeelka ah oo lagu soo bandhigo dharka, waxayna yeelan karaan naqshado fudud ama qaabab ka sii buun-buuninaya.
4. Dhar culus oo culus
Dharka qaro weyn iyo kuwa culus waa qaro weyn yihiin oo xoqan yihiin, waxayna soo saari karaan saameyn xasilooni leh, oo ay ku jiraan dhammaan noocyada dhogorta dhogorta badan iyo kuwa xijaabka leh. Dharku wuxuu leeyahay dareen ah ballaarinta jirka, mana haboona in la isticmaalo waxyaabaha lagu farxo iyo aruurinta wax badan. Qaabka qaabeynta, qaababka A iyo H ayaa ah kuwa ugu habboon.
5. Dhar cad
Dharka hufan ayaa ah mid fudud oo hufan, oo leh farshaxan farshaxan oo qarsoodi ah. Waxaa ka mid ah suuf, silk, dharka kiimikada, sida georgette, satin silk, silsilada kiimikada, iwm Si loo muujiyo daahfurnaanta dharka, khadadka sida caadiga ah loo adeegsado si dabiici ah oo hodan ah H-qaabeeya iyo miis wareegaya qaababka naqshadeynta.